Kungani amamaki ezingane engeyona into ebaluleke kakhulu | Bezzia
Kungani amamaki ezingane engeyona into ebaluleke kakhulu
UToñy Torres | 25/05/2022 20:00 | Iseluleko omama
Lapho unyaka omusha wesikole usuzophela, sekuyisikhathi sokwamukela nokuhlola amamaki asabekayo, lawo mabanga Bangenza umonakalo omkhulu ekuzethembeni kwabancane uma zingamukelwanga ngendlela efanele. Ngoba isibalo esisodwa, inombolo elula ehlotshaniswa nesihloko, akwanele ukunquma ukuthi umzamo ube yini phakathi nesifundo.
Ubani omunye futhi omncane odlule ekuhluphekeni kokugembula yonke into ngenothi elilodwa, into engalungile ngempela, ikakhulukazi uma kuziwa ezinganeni. Ngoba emiphumeleni yezivivinyo kumele sengeze umzamo owenziwe, amahora okusebenza ekhaya, ukuzidela kokushiya ezinye izinto ezijabulisayo ukuze senze imisebenzi nomsebenzi wesikole. Umzamo wezinyanga eziningi okungabukelwa phansi uma kuphela amamaki okugcina ebhekwa.
1 Amanothi awawona abaluleke kakhulu
1.1 Athini amanothi ngobuntu babafundi
1.2 Indlela ibaluleke kakhulu kunomgomo
Amanothi awawona abaluleke kakhulu
Nakuba edingekayo ukuze kuhlolwe izingane, amamaki awabaluleke kakhulu ngoba ezimweni ezimbalwa kakhulu abonisa umzamo weqiniso womfundi. Ukuze ufike emabangeni okugcina kufanele udlule izinsuku eziningi zokufunda, izifundo eziningi ngezinye izikhathi ezingaqondwa kahle. Izinsuku lapho abafundi bengenangqondo kakhulu, bethwele amakhanda kwezinye izinto, bekhula, bethuthukisa ubuntu babo, bengakwazi ukudebeselela izifundo zabo.
Ngalezo zinyanga abafana namantombazane bachitha isikhathi esiningi belungiselela futhi befunda futhi lapho usuku lokuhlolwa lufika badlala yonke into ekhadini elilodwa. Okuthile okungalungile ngokwengxenye, ngoba ngalolo suku bangase bethuke kakhulu, benezinkinga zokugxilisa ingqondo, kungenzeka ukuthi balele kabi noma bamane bengazi ukuthi kwenziwa kanjani ukuhlolwa. Y lelo banga abalitholayo, aliwuvezi nhlobo lowo mzamo okuthi uma kunjalo ingabi nawo umvuzo wayo oyifanele.
Kuzo zonke lezi zizathu, amamaki ezingane akuyona into ebaluleke kakhulu. Ziyindlela nje yokulawula ukufunda ngohlelo oluqondakala kalula phakathi kwabazali nothisha. Akukubi futhi ukuthi izingane zikuqonde lokho Ibanga elibi liwumphumela omubi, ukuthi kufanele basebenzele ukuyithuthukisa futhi babafundise indlela engcono kakhulu yokuyenza.
Athini amanothi ngobuntu babafundi
Amanothi omfundi angakusiza ufunde okuningi mayelana nobuntu nentuthuko yengane yakho. Ikakhulukazi endabeni yabafana abasakhula abaqala ukwakha umbuthano wabo wokuxhumana nabantu, babe nezithakazelo zabo futhi basendleleni eya kulokho okuyoba ikusasa labo lochwepheshe. Umfana ohlale eletha amaphuzu aphezulu kakhulu, ingase ibonise inkinga yokuzikhandla ngokweqile. Akachithi isikhathi kwezinye izinto, akahambi nabangani, akaxhumani, lezi ezinye zezibonelo zezinkinga okufanele zilawulwe ukuze izingane zingabi nezinkinga ezithinta izifundo.
Ngakolunye uhlangothi, kochwepheshe, lokho okushiwo amanye amanothi agxile ezintweni eziphawulekayo, kubonisa ukuthi umfundi uyasebenza, ufundela ukwenza izifundo zakhe. Kodwa futhi abonisa ukuthi unezinye izinto ezikukhathazayo, ukuthi uchitha isikhathi wenza eminye imisebenzi, ukuthi unentokozo yokuzilibazisa nokuphila komphakathi. Nakanjani, umfundi unempilo evamile lapho izifundo ziyingxenye ebalulekile, kodwa azicabangi ukuthi kukhona okucindezelayo.
Indlela ibaluleke kakhulu kunomgomo
Isikole siwumsebenzi wezingane, kuyisibopho sazo ukufunda izinto eziningi futhi ziqeqeshelwe ukuba nempilo yabantu abadala. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela abayikhethayo, uma bethanda ukutadisha noma cha, uma bengenazo izifiso zokuyofunda enyuvesi noma umsebenzi wobungcweti. Imfundo iyingxenye ebalulekile yokuthuthukiswa kwengane futhi kufanele bakuqaphele.
Kodwa akufanele neze ushiye eceleni umbono, ukubaluleka okuyiqiniso kwengane okungumzamo, umsebenzi owenziwe, isifiso sokuthuthukisa futhi ufuna ukwenza kangcono ngaso sonke isikhathi. Wonke lowo mzamo yilokho abazali okufanele babazise ngempela ekupheleni kwesifundo. Ngoba indlela ibaluleke kakhulu kunomgomo ngakho-ke, amamaki ezingane akuyona into ebaluleke kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Iseluleko omama » Kungani amamaki ezingane engeyona into ebaluleke kakhulu
Ukunqunywa kwezikhala ebudlelwaneni bombhangqwana
Zitholele isihloko esisha sika-Massimo Dutti: Ngokukhanya